QPrompt, एक नि: शुल्क र खुला स्रोत Teleprompter | Ubunlog
अर्को लेखमा हामी QPrompt मा हेर्न जाँदैछौं। यो हो भिडियो सिर्जनाकर्ताहरूको लागि एक पेशेवर Teleprompter सफ्टवेयर। इन्टरफेसले हामीलाई ट्याब्लेट, अध्ययन, वेबक्याम र मोबाइल फोनहरूको टेलिप्रम्प्टरहरूसँग काम गर्न अनुमति दिनेछ। यसको सबैभन्दा उल्लेखनीय क्षमता शायद पृष्ठभूमि पारदर्शी बनाउने क्षमता हो, जसले भिडियो कन्फरेन्सिङको लागि उत्कृष्ट बनाउँछ।
आज, धेरै प्रकारका मानिसहरूले भिडियो सामग्री सिर्जना गरिरहेका छन्। YouTubers देखि स्कूल शिक्षकहरू भिडियो बनाउन समर्पित छन्। यो तथ्यलाई धन्यवाद छ कि आज प्रयोगकर्ताहरूसँग राम्रो भिडियोहरू सिर्जना गर्न स्क्रिन रेकर्डर र सम्पादकहरू हुन सक्छन्। QPrompt जस्ता टेलिप्रम्प्टरहरू पनि ती उपकरणहरूको अंश हुन् जुन हामीले हाम्रा भिडियोहरू सिर्जना गर्न उपलब्ध पाउनेछौं। यो कार्यक्रम प्रयोगको सहजता, कार्यसम्पादन, नियन्त्रण परिशुद्धता, र क्रस-प्लेटफर्म समर्थनमा ध्यान केन्द्रित गरी निर्माण गरिएको हो।.
टेलिप्रम्प्टरहरूले भिजुअल संकेतहरू वा पाठ पनि चलाउँछन् ताकि स्पिकरले बोल्दा यसलाई पढ्न सक्छ। हातमा रहेको टेलिप्रम्प्टर सफ्टवेयर, जुन विभिन्न उपकरणहरूमा चलाउन सकिन्छ। QPrompt मा Q ले यो कार्यक्रम Qt फ्रेमवर्क प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएको हो भनेर संकेत गर्दछ। ती सबैले यसलाई केडीईको लागि उत्कृष्ट विकल्प बनाउँछ, तर यसले GNOME मा पनि काम गर्छ।
1 QPrompt को सामान्य विशेषताहरु
2 Ubuntu मा QPrompt स्थापना गर्नुहोस्
2.1 AppI छवि को रूपमा
2.2 फोटो जस्तै
2.3 Flatpak जस्तै
QPrompt को सामान्य विशेषताहरु
यो कार्यक्रम Windows, macOS, Gnu / Linux र Android मा चल्न सक्छ.
स्टुडियो, ट्याब्लेट, वेबक्याम र फोन Teleprompters को रूपमा काम गर्दछ.
हामीलाई अनुमति दिनेछ अन्य सफ्टवेयरबाट टाँस्नुहोस् समस्या छैन।
कार्यक्रम छ तरल गति.
हामी गर्न सक्छौं पाठमा अन-द-फ्लाइ परिवर्तनहरू गर्नुहोस् प्रदर्शन गर्न।
हामीसँग यसको सम्भावना हुनेछ लिपिको कुनै पनि भागमा जान मार्करहरू प्रयोग गर्नुहोस्.
बहु-स्क्रिन सन्देश, स्वतन्त्र नक्कल संग।
La पृष्ठभूमि पारदर्शिता यसले हामीलाई पाठ पछ्याउँदा आफूलाई वा हाम्रा श्रोताहरूलाई हेर्न अनुमति दिनेछ।
यो छ निर्मित स्टपवाच। कार्यक्रमले बाँकी समय अनुमान गर्दछ।
पनि समावेश छ प्रगति सूचक, ताकि हामीलाई थाहा छ कति बाँकी छ।
यो प्रयोग गर्न सकिन्छ रिच टेक्स्ट ढाँचा.
को लेखन प्रणाली समर्थन गर्दछ १० भन्दा बढी भाषाहरू.
Ubuntu मा QPrompt स्थापना गर्नुहोस्
Ubuntu प्रयोगकर्ताहरूसँग विकल्प हुनेछ स्थापनाको लागि AppImage, Snap र Flatpak फाइलहरूबाट चयन गर्नुहोस्.
यो हुन सक्छ बाट AppImage फाइल प्राप्त गर्नुहोस् परियोजना रिलीज पृष्ठ। तपाईं टर्मिनलमा टाइप गरेर आज प्रकाशित नवीनतम संस्करण पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ:
जब हामी फाइल डाउनलोड गर्छौं, हामीले गर्नुपर्छ अनुमति दिनुहोस्। यो एउटै टर्मिनलमा टाइप गरेर गर्न सकिन्छ (Ctrl + Alt + T):
अघिल्लो कमाण्ड कार्यान्वयन पछि, हामी गर्न सक्छौं फाइलमा डबल क्लिक गरेर वा टर्मिनलमा चलाएर कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस्:
Para जस्तै यो कार्यक्रम स्थापना गर्नुहोस् स्न्याप प्याक, हामीले टर्मिनल खोल्नु पर्छ (Ctrl + Alt + T) र यसमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ:
कार्यक्रम स्थापना पछि, हामी सक्छौं हाम्रो प्रणालीमा लन्चर खोजेर यसलाई सुरु गर्नुहोस्.
यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने यस कार्यक्रमबाट स्नाप प्याकेज हटाउनुहोस्, केवल टर्मिनल खोल्नुहोस् (Ctrl + Alt + T) र यसमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुहोस्:
प्याकेजको रूपमा यो कार्यक्रम प्रयोग गर्न Flatpak, यो हाम्रो उपकरण मा सक्षम यो टेक्नोलोजी को लागी आवश्यक हुनेछ। यदि तपाइँ Ubuntu 20.04 प्रयोग गर्नुहुन्छ, र तपाइँसँग अझै पनि यी प्रकारका प्याकेजहरू सक्षम छैनन्, तपाइँ जारी राख्न सक्नुहुन्छ गाईड कि एक सहकर्मीले यो ब्लगमा केहि समय अघि लेखेका थिए।
जब तपाइँ तपाइँको प्रणालीमा यी प्रकारका प्याकेजहरू स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ टर्मिनल खोल्न सक्नुहुन्छ (Ctrl + Alt + T) र चलाउन सक्नुहुन्छ। आदेश स्थापना गर्नुहोस्:
स्थापना पूरा गरेपछि, तपाईं सक्नुहुन्छ तपाइँको कम्प्यूटरमा प्रोग्राम लन्चर खोजी गरेर वा टर्मिनलमा टाइप गरेर कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस्:
Flatpak प्याकेज हटाउनको लागि, हामीले केवल टर्मिनल खोल्नु पर्छ (Ctrl + Alt + T) र यसमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुहोस्:
यस परियोजनाको बारेमा थप जानकारीको लागि, प्रयोगकर्ताहरूमा जान सक्नुहुन्छ परियोजना वेबसाइट वा उसको GitHub मा भण्डार.
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » QPrompt, एक नि: शुल्क र खुला स्रोत Teleprompter
Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish ले GNOME 42 प्रयोग गर्नेछ, तर सानो GTK4